पब्जी खेल्न रोकेपछि छोराले बुबाको शि*र छि*नाले – ताजा समाचार
पब्जी खेल्न रोकेपछि छोराले बुबाको शि*र छि*नाले
काठमाडाैं । आफूलाई पब्जी खेल्न रोकेको आक्रो*शमा एक युवाले बुबाको घाँटी रे*टेर ह*त्या गरेका छन्। भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकको बेलगावी जिल्लाका एक २१ वर्षीय युवकलले आफ्नै पिताको शिर का*टेर ह*त्या गरेका हुन्।
तस्विर : पब्जी खेल्नमा व्यस्त रहेका ४ युवा ।
पब्जीमा आ*दत लागिसकेका रघुवीर कुम्भर नामका ती युवकले बुबाले आफूलाई पब्जी खेल्न रोकेपछि बुबा शेखरप्पा रेवप्पा कुम्भरको शि*र का*टेर ह*त्या गरेका हुन्। छोराको पब्जी खेल्ने बानीले पढाइमा असर गरेको भन्दै उनका पिताले उनलाई सो खेलका लागि रोक लगाएका थिए। बेलगावीका पुलिस कमिसनर लोकेस कुमारले भनेका छन्, ‘ती युवकलाई मोबाइल खेलको लत लागिसकेको थियो। उनी चाहन्थे कि उनका बाबुले मोबाईल रिचार्ज गरुन् जसकारण उनी साे खेल खेल्न सकुन्।’ पब्जी खेल्ने र नखेल्ने विषयमा दुई बाबुछोराबीच झ*गडा भएको थियो।
बुबासँग झगडा भएपछि ती युवाले आमालाई बाहिर पठाएर पहिले बाबुको खुट्टा काटेका थिए। त्यसपछि उनले धारिलो हतियार प्रयोग गरेर बुबाको शिर छि*नालेका थिए। बुबाको ह*त्या भएको देखेपछि ती युवककी आमा चिच्चाउँदै बाहिर नेस्केर छिमेकीसँग गुहार मागेकी थिइन्। छिमेकीले प्रहरीलाई बोलाएर ती युवकलाई पक्राउ गराएका थिए।
एक भिडियो पनि हेर्नुहोस्
Pubg खेल्दा खेल्दा दिमाग मा गहिरो असर परेको रे ! बच्चाहरुलाई गेम खेल्ने निहुँमा धेरै मोबाईल चलाउन नदिनुहोला। जनहितमा जारी ??